Dalalkii Qatar go’doomiyey oo soo debcay Iyo Gomaada Laga Sugayo Dalka Qatar | Saxil News Network
Dalalkii Qatar go’doomiyey oo soo debcay Iyo Gomaada Laga Sugayo Dalka Qatar
Doha (Saxilnews.com)-Afarta dal ee Carbeed ee hormuudka u ahaa go’doominta Qatar ayaa ka soo debcay halkii ay taagnaayeen oo haatan kuma adkaysanayaan in Qatar saddex iyo tobankii qodob ee ay bishii hore u soo gudbiyeen ay fuliso.
Diblomaasiyiin ka kala socda Sucuudiga, Imaaraatka, Baxrayn iyo Masar ayaa warfidiyeenka ugu sheegay xarunta Qaramada Midoobay in ay haatan doonayaan in Qatar fuliso lix qodob oo mugweyn.
Qodobadan ay sheegeen waxa ka mid ah la dagaalanka argagixisada iyo xag jirka iyo in ay joojiso talaabooyinka carinta iyo kicinta ah.
Qatar oo beenisa in ay argagixisada taageerto ayaan iyadu markiiba ka jawaabin hadalkan diblomaasiyiintu sheegeen.
Waxay sidoo kale ganafka ku dhufatay qodobadii ay u soo jeediyeen dalalkaasi oo ay ku sheegtay in ay halis ku yihiin qarannimadeeda ama ay xad gudub ku yihiin xeerka caalamiga ah, waxaanay sidoo kale dhaleecaysay “go’doonka” ay geliyeen dalalka la olloga ahi.
Diblomaasiyiinta ka socday afarta dal waxay warbixintii ay warfidiyeenka ku siiyeen xarunta Qaramada Midoobay ee New York ku sheegeen in ay doonayaan in xiisadda lagu dhameeyo xal sokeeye.
Danjiraha Sucuudiga u fadhiya Qaramada Midoobay, Cabdullah al-Mucallimi, ayaa sheegay in wasiirada arimaha dibadda ee dalalkoodu lixdan qodob ee cusub isku raaceen markii ay ku shireen Qaahira 5 Juulaay “waana kuwo u fudud Qatar oo ay aqbali karto” ayuu yidhi.